Qatar Airways waxay si rasmi ah u bilawday barnaamijkeeda dejinta kaarboonka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Qatar Airways waxay si rasmi ah u bilawday barnaamijkeeda dejinta kaarboonka
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Qadar • Jebinta Wararka Safarka • News • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Qatar Airways maanta waxay ku dhawaaqday bilaabida rasmiga ah ee barnaamijkeeda kaarboon kaarboonta. Rakaabka diyaarada ayaa hada fursad uhelaya inay si iskood ah uyareeyaan qiiqa kaarboon ee qiiqa laxiriira safarkooda barta ballansashada.
Barnaamijka kaarboon-ka ee Qatar Airways waxaa lagu dhisay iskaashi lala yeeshay Barnaamijka Kaarboon-ka-bixinta Hawada ee Caalamiga ah (IATA), iyada oo macaamiisheeda siinaysa hubaal ah in dhibcaha la soo iibsaday ee lagu sii deynayo qiiqaas ay ka yimaadeen mashaariic si madaxbanaan loo xaqiijiyay dhimista kaarboonka iyo sidoo kale ballaaran. faa'iidooyinka deegaanka iyo bulshada.
Madaxa Fulinta ee Qatar Airways Group, Mudane Mr. Akbar Al Baker, ayaa yiri: “Waxaan ku faraxsanahay inaan awood u siino macaamiisheenna fursad ay ku dheellitiraan qiiqa kaarboonka ee la xiriira safarkooda annaga. Maaddaama ay tahay diyaarad ka mas'uul ah deegaanka, raxanteenna casriga ah ee diyaaradaha tikniyoolajiyadda sare leh, oo ay weheliso barnaamijkeenna waxtarka u leh shidaalka, ayaa la isu keena si loo hagaajiyo waxqabadka diyaaradaha iyo in la yareeyo saameynta deegaanka ee duulista. Macaamiisheennu hadda waxay gacan ka geysan karaan inay sii yareeyaan raadkooda deegaanka iyagoo doorbidaya inay gacan ka geystaan ​​barnaamijkeenna dejisan kaarboon. ”
Agaasimaha Guud iyo Agaasimaha Guud ee IATA, Mr. Alexandre de Juniac, ayaa yiri: “Waxaan ku faraxsanahay inaan ku soo dhaweyno Qatar Airways Barnaamijka IATA Carbon Offset Program. Ballanqaadkoodu wuxuu hoosta ka xariiqayaa go'aanka warshadeena ee ah in la yareeyo saameynta aan ku leenahay deegaanka iyadoo u oggolaaneysa macaamiisha Qatar Airways fursad ay ku yareeyaan saameynta deegaanka ee socdaalkooda. Ma jiro wax lagu beddeli karo duulimaadka marka laga hadlayo safarka masaafada dheer iyo dejinta kaarbooni waa hab deg deg ah, toos ah oo macquul ah oo lagu xaddidayo saameynta isbeddelka cimilada. ”
Macaamiilku waxay dooran karaan barnaamijka 'Qatar Airways' ee dejinta kaarboonka marka ay tikidhada ka iibsaneyso websaydhka Qatar Airways iyo dalabka moobiilka. Macluumaadka ballansashada, oo ay ku jiraan macluumaadka la xiriira barnaamijka dejinta kaarboonka, waxaa lagu heli karaa luqado badan oo ay ku jiraan Carabi, Shiine (classic), Shiineys (dhaqameed), Croatian, Czech, Ingiriis, Farsi, Faransiis, Jarmal, Griig, Hungari, Indooniisiyaan, Talyaani, Jabbaan , Kuuriyaan, Boolish, Boortaqiis, Romaaniya, Ruush, Seerbiya, Isbaanish, Thai, Turki, Yukreeniyaan, iyo Fiitnaam.
Qiiqa ayaa lagu dheellitirayaa khabiirka cimilada iyo horumarka waara ee ClimateCare, iyada oo loo sii marayo mashruuca Fatanpur Wind Farm ee Hindiya. Mashruucani wuxuu rakibay matoorro marawaxadaha dabaysha (WTGs) oo wadar ahaan wax soo saarkoodu yahay 108 MW si loo soo saaro loona siiyo koronto nadiif ah Gridka Qaranka ee Hindiya. Mashruucu wuxuu ka kooban yahay 54 marawaxadaha dabaysha, oo lagu rakibay gudaha iyo hareeraha tuulooyinka Taluk Dewas, Tonkkhurd iyo Tarana Taluk oo ka tirsan degmooyinka Dewas iyo Ujjain ee Madhya Pradesh. Marawaxadaha ayaa kala erya korontada laga soo saaro ilaha shidaalka laga soo saaray shabakada Hindiya, taasoo yareyneysa xoojinta guud ahaan kaarboonka una horseedaya yareynta qiiqa. Mashruucani wuxuu iska ilaaliyaa 210,000 tan oo ah wasakhda gaaska aqalka sanadkiiba.
Agaasimaha ClimateCare ee Iskaashiga, Mr. Robert Stevens, ayaa yiri: “Waxaan ku faraxsanahay inaan la shaqeyno Qatar Airways iyo IATA si aan uga fariisano tayo sare, waxaan si madaxbanaan u xaqiijinay dhibcaha kaarboonka oo ka wakiil ah macaamiisha Qatar Airways oo doonaya inay qaadaan masuuliyadda saameynta deegaanka. duulimaadyadooda. Taageeradooda mashruuca Fatanpur kaliya ma yareynayso qiiqa kaarboonka adduunka qiiqa ka soo baxa, waxay sidoo kale siisaa fursado shaqo; waxay gaarsiisaa waxbarasho la hagaajiyay iyada oo la siinayo agab iyo khibrad dugsiyada u dhow; waxayna taageertaa unug caafimaad oo guurguura - kaasoo u sahlaya bulshada deegaanka daryeel caafimaad. ”
Barnaamijka kabista Kaarboon-ka ee IATA waxaa ansixiyay hay'ad madax-bannaan oo hubisa Tayada Heerka Hubinta Tayada, heerka ugu sarreeya ee kaarboon-ka-dejinta kaas oo qiimeeya sida ay ururadu u xisaabiyaan qiiqa, u doortaan mashaariicda dib-u-dhiska iyo sida ay ula xiriiraan macluumaadkan macaamiishooda. IATA waa mid ka mid ah afar urur oo kaliya adduunka oo dhan si ay ula kulmaan heerkaan.
Hawlaha Qatar Airways kuma xirna nooc diyaaradeed oo gaar ah. Diyaaradda noocyadeeda kala duwan oo casri ah oo shidaal-ku-ool ah ayaa macnaheedu yahay inay sii wadi karto duulimaadkeeda iyadoo bixinaysa awoodda saxda ah ee suuq kasta. Saamaynta COVID-19 ee baahida safarka awgeed, waxay shirkaddu qaadatay go'aanka ah inay joojiso raxankeeda Airbus A380s maadaama aysan ganacsi ahaan ama deegaan ahaan qiil u lahayn inay ku shaqeyso diyaarad sidan u weyn suuqa hadda jira. Maraakiibta duulimaadyada ee 52 Airbus A350 iyo 30 Boeing 787 ayaa ah xulashada ugu habboon ee marinnada dhaadheer ee istiraatiijiyad ahaan muhiimka u ah Afrika, Ameerika, Yurub iyo gobollada Aasiya-Baasifigga.